Tsy nahomby ny tranokala tambajotra sosialy Wal-Mart. $ 50 amin'ny vazivazy tsara indrindra! | Martech Zone
Tsy nahomby ny tranokala tambajotra sosialy Wal-Mart. $ 50 amin'ny vazivazy tsara indrindra!
Alarobia, Oktobra 4, 2006 Alahady, Septambra 30, 2012 Douglas Karr
Tsy fantatro akory fa nanandrana izy ireo! Wal-Mart tsy nahomby amin'ny fananganana tranokala tambajotra sosialy ho an'ny Kool Kidz.
Te hanao an'ity lahatsoratra misokatra ity aho satria be loatra ny vazivazy eto. Ahoana izany? Ny vazivazy tsara indrindra momba ny antony tsy nahombiazan'ny vohikalan'ny tambajotra sosialy Wal-Mart (ary angamba mihoatra ny internet amin'ny ankapobeny) dia napetraka tao amin'ny kaonty Paypal. Hitsahatra amin'ny vazivazy 50 izahay ary avela hanao vazivazy tokana ny tsirairay. Tsy handefa vazivazy manafintohina aho (raha tsy hoe manafintohina an'i Wal-Mart fotsiny).
1. Satria tsy afaka mametaka mpandraharaha $ 6.00 / ora izy ireo hiasa amin'izany.
4 Okt 2006 amin'ny 4:06 PM
Sarotra ny mivarotra ny kool kidz rehefa any amin'ny toeram-pivarotana izy ireo.
4 Okt 2006 amin'ny 4:54 PM
Noho ny fahadisoana diso, niangavy ny mpamaham-bolongana A-list rehetra ny mailaka mailaka Wal-Mart mba hanao “HELL FAMPANDROSOANA” fa tsy “FAMPIANARANA fampiroboroboana!”
4 Okt 2006 amin'ny 6:16 PM
4 Okt 2006 amin'ny 8:50 PM
Renoky ny torimaso ilay Walmart Greeter/Webmaster 82 taona.
4 Okt 2006 amin'ny 9:21 PM
Satria ny Wal-Mart dia lehibe loatra ka tsy afaka miditra amin'ny andian-tavoahangy.
4 Okt 2006 amin'ny 11:07 PM
“Toa novidin'i Goodwill ireo mpamorona tranonkala mahay rehetra ao amin'ny faritra: nahatonga ny tetikasan'ny tambajotra sosialy hijanona tanteraka. Ny vaovao tsara, toy ny mahazatra, dia ny 'Day of the Week Underwear' antsika manokana dia nijanona ho vokatra be mpividy indrindra nandritra ny 10 taona nifanesy… " - Walton
5 Okt 2006 amin'ny 12:10 PM
Oay, tapaka ny tamberiko. (Ry malala, nampihena ny bilaogiko izy ireo).
3. Satria ny orinasa izay mitady vola amin'ny famotehana vondrom-piarahamonina, dia tsy afaka manantena ny hahazo vola amin'ny fananganana vondrom-piarahamonina.